Nnukwu nku anya nke ụlọ ọrụ China na -ere 3D lashes na ụlọ ọrụ mkpuchi igbe onwe ya na ndị na -emepụta ya | Weiti
Nnukwu nku anya ụlọ ọrụ na -ere ihe nkpuchi 3D nwere igbe nku anya nkeonwe
1, nku anya mink ụdị DONNA
2, 14mm lashes dị nro dị nro
3, OEM & ODM ọrụ enyere
4, Nnukwu ngwaahịa dị njikere maka ọrịre
√A na -eme Kalocils 3D mink lashes nke ezigbo ntutu mink 100%, na -awụpụ site na ntutu nke minks na -ada ada, wee mee ka ọ dị ọcha. Anyị agaghị emerụ anụmanụ ahụ ahụ ma ọlị! Nku anya mink anyị bụ hypoallergenic, enweghị kemịkal, emerụla anya gị.
√Ọ bụ ndị ọkachamara mere aka nku anya mink ndị a. Ezigbo ọrụ na ibe na lashes amamihe. Ezigbo ihe osise 3D, nwere akwa eke zuru oke na curl, mmetụta maka etemeete dị iche iche. Ọdịdị na -adọrọ adọrọ ma dị egwu mana ọdịdị. Ọ na -eme gị nke ọma, na -adọrọ adọrọ, na -egbu maramara, na -adọrọ adọrọ.
√Lashes ụgha a dị ogologo ma sie ike, ị nwere ike belata ogologo dịka mkpa gị si dị. A na -ejigharị lashes 3D mink lashes, enwere ike iji ya karịa ugboro 15 n'okpuru ọnọdụ nkịtị. Ọ dị mfe itinye, ọ dịghị mfe idobe. Ọ dị mma maka ndị ọkachamara ma ọ bụ naanị ndị mbido.
√Ntutu ntutu adịgboroja a dị fechaa ma dịkwa nro, ị nweghị ike ịmanye ịdị arọ ya mgbe ị na -eyi ya. Nkasi obi maka ndụ kwa ụbọchị, ọrụ, ma ọ bụ ịga oriri. Ọ ga -eme ka anya gị na -enwu. Nke a bụkwa nhọrọ onyinye gị kacha mma.
Nke gara aga: OEM 3D nku anya mink lashes ejiri aka mee etemeete warara zuru oke
Osote: Top Quatity ejiri aka mee warara 3D 14mm na -adigide na -adọkpụ mink lashes
3D nku anya
ụlọ ọrụ ntutu anya
Ndị na -ere ntutu anya
nku anya mink
igbe igbe anya nkeonwe
Mepụta nkeonwe Label lashes N'ogbe ...
Igbe mkpuchi ntutu ahaziri onwe ya nke ukwuu Lon ...
Okomoko Siberian nku anya Real 3d Mink lashes M ...
Nnukwu Mepụta nkeonwe Label ejiri aka mee ...
N'ogbe ejiri mee Ọkpụkpụ Fluffy 3d Mink Lashes ...
3D Mink nku anya ntecha N'ogbe ụgha ụgha min ...
eyeliner, Anya anya, Ndị na -ere ntutu anya, Mgbatị ntutu anya, egbugbere ọnụ, mink lashes,